Location: musha » Kutumira » Kuputsa Kufamba Nhau » Solomon Islands: 82,000 inogona kubatwa nekudengenyeka kwenyika kwapfuura 6.2
Solomon Islands: 82,000 inogona kubatwa nekudengenyeka kwenyika kwapfuura 6.2
Vagari venzvimbo uye vashanyi vakamutswa neMuvhuro mangwanani pa6.37 am mushure mekudengenyeka kwenyika 6.2 muSolomon Islands kwarova. Inogona kukanganisa vanhu vangangoita 82000 mukati me100km.
Vagari venzvimbo uye vashanyi vakamutswa neMuvhuro mangwanani pa6.37 am mushure mekudengenyeka kwenyika 6.2 mukati Soromoni Islands rova. Inogona kukanganisa vanhu vangangoita 82000 mukati me100km.
Kudengenyeka kune simba kwakarova pakadzika makumi masere nemasere (makumi mashanu nemashanu), makiromita makumi matanhatu nematanhatu NW yeKirakira, Solomon Islands
Sekureva kwenzira yeU.S. tsunami yambiro, hapana yambiro nezveTsunami, Advisory, Watch, kana Threat zvichitevera kudengenyeka kwenyika kwavakayera paM6.7.
Iyo nzvimbo zvinoenderana neUSGS
66.1 km (41.0 mi) NW yeKirakira, Solomon Islands
181.3 km (112.4 mi) ESE yeHoniara, Solomon Islands
776.5 km (481.4 mi) ESE yeArawa, Papua New Guinea
864.4 km (535.9 mi) NW yeLuganville, Vanuatu
1126.8 km (698.6 mi) NW yePort-Vila, Vanuatu
Panguva ino hapana kukuvara kana kukuvara kunozivikanwa.
NY World Trade Center Subway Station ia chiyeuchidzo kuUniversal Declaration of Human Rights
Nepal Tourism inopenya pa5th Sichuan International Travel Expo (SCITE)